Apple dia mitazona ny zony hivoaka avy lavitra ho an'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Ny ankamaroan'ny sarimihetsika sy andian-tantara izay mahatratra ny Apple TV + sy ny serivisy horonantsary streaming hafa dia avy amin'ny fampifanarahana ny boky sy / na ny eritreritry ny mpanoratra script. Ny fifanarahana farany nataon'ny Apple hamoronana atiny am-boalohany dia hita ao amin'ny famoahana Fe-potoana.
Araka ny voalazan'ity haino aman-jery ity, Apple dia nahazo ny zon'ny adaptation film an'ny mozika Broadway Mivoaha avy eo. Ity lalao ity, izay nahazo loka Tony (The Oscars of theatre), notarihin'i Christopher Ashley ary nitantara ny tantaran'ny mpandeha an'arivony voafandrika tao amin'ny tanàna kely iray any Newfoundland.
Ashley dia nahazo ny loka Tony ho an'ny fitarika mozika an'ny Tongava lavitra. Ankoatra izany, koa dia notendrena ho choreography tsara indrindra. Ny lalao dia nosoratan'ireo mpandresy loka Tony Olivier Irene Sankoff sy David Hein.
Jennifer Todd sy Bill Condon dia mamokatra miaraka amin'ny mpamokatra voalohany ny asa, Junkyard Dog Productions, ary koa Mark Gordon. Brittany Hapner dia hiasa miaraka amin'ny mpamokatra. Laurel Thomson dia mpanamboatra mpanatanteraka ho an'ny eOne.
Ny vondrona Alchemy Production no hiandraikitra izany famokarana sehatra sy fitarihana ankapobeny. RadicalMedia (Hamilton, David Byrne's American Utopia) no handray an-tanana ny fandraisam-peo.
Ny famokarana an'ity sarimihetsika vaovao ity dia hanomboka amin'ity volana mey ity any New York City ary hanana mpiasa 200 mahery. Ity horonantsary ity dia hanana ny famokarana ny lalao Broadway, na dia hanitatra ny mpilalao aza izy mba hanatanterahana ny fampifanarahana. Ny premiere an'ny Mivoaha avy eo dia kasaina hatao amin'ny faran'ity taona ity ao amin'ny Apple TV +.
Mivoaha avy eo dia teo amin'ny volavolan-dalàna tany amin'ny firenena maro rehefa tonga ny areti-mifindra coronavirus, ka raha nikasa ny handeha teatra ianao tamin'izany fotoana izany dia afaka miandry ianao hahita ny valiny amin'ny Apple TV + rehefa manomboka izy. Ity no famokarana Broadway voalohany nifarana tamin'ny Apple TV + ary mety tsy ho ity ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia mitazona ny zony hivoaka avy lavitra ho an'ny Apple TV +
Mpampiasa iray mandefa AirTag amin'ny alàlan'ny paositra raha toa ka maharaka ny dia izy ireo